Semifinalists of abaalmarinta BE 2008 - Geofumadas
Mee, 2008 tabo cusub, Microstation-Bentley
Waxaa ka tagay liiska abaalmarinta semi NOQON 2008 Awards, oo waa abaalmarinta in Bentley Systems ka dhigaysa shirkadaha innovate iyo hirgelinta teknoolajiyada ay, inkasta oo aan weli si rasmi ah la daabacay.
Iyadoo farxad weyn ayaan u aragnaa in Xarunta Diiwaanka Qaranka laga bilaabo El Salvador ayaa gaartay finalka, waxaana sidoo kale loo magacaabay abaalmarinta "bulshada waayeelka ah" oo gaar ah.
Waxaan rajaynaynaa inaad tallaabooyinkiisa raacdaan ee Honduras 2004 iyo 2005 may ahayn oo kaliya Maxacalin laakiin u suurtagashay in ay ku guuleysato kaalinta koowaad ee mashruuca u dhigma ... laakiin marka la eego dhidibada iyo xajinta waxa Salvador waxa ay iyaga ka hor qaadato.
Qeybta Cadastare iyo Maamulka Territoriga ah waa kuwan mashruucyada semi-finalka:
Hay'ad Mashruuca Dalka
Xarunta Diiwaanka Qaranka Horumarinta Nidaamka Dhulka iyo Nidaamka Dhulka El Salvador
Xafiiska Marshalls Xafiiska Sare ee Sare Hadafka dawladda Eretria ee Silesia Hoose, oo u suurtogeliya horumar waara Holland
Gemeente Utrecht, Horumarinta Magaalooyinka
Wakaaladda Goobta Macluumaadka Muuqaalka iyo sawiridda 3D - Magaalada Hamburg Alemania
Urząd Miasta St. Warszawy Hirgelinta khariidadaha akoustic ee magaalada caasimadda ah ee Warsaw oo leh nidaamyo adag oo abuura Poland
Geodeticky si kartograficky ustav Nidaamka macluumaadka iyo xakamaynta jajabnaanta Slovakia
ISKI Qaran Mudurlugu Nidaamka macluumaadka maamulka maareynta biyaha iyo maareynta bulaacadaha (mashruuca Istanbul ee ISEMBIS) ... mar kale Turkiga
Baadhitaanka iyo Mapping Bureau ee Zhejiang Khariidadda aasaasiga ah ee qaabka waxsoosaarka garaafka ah ee gobollada Zhejiang Shiinaha
Wadamada Isbanishka ku hadla ayaa tartamaya, marka laga reebo El Salvador:
Tareenka xawaaraha sare ee tareenka ee Barcelona (Spain) qaybta dib-u-dhiska ee Tareenada iyo Gaadiidka
iyo Venezuela Warshadda cufnaanta cufnaanta sare ee Polyethylene, ee qaybta cusub ee Hindisaha Saliidda iyo Gaaska.
Soo koobid, mashaariicda kale ee 134 waa:
Koonfur Afrika 5
Waan arki doonaa waxa aan ka heleyno usbuuca soo socda.
Post Previous«Previous Natiijooyinka Sawirada
Post Next Ka soo qaad khadka UTM ee 1: Xaashiyaha 50,000 ee wadankaagaNext »